Isan-taona, Mamono Olona An-jatony i Iràna Amin’ny Ady Amin’ny Rongony Ataony Izay Vatsian’ny Firenena Mikambana Vola · Global Voices teny Malagasy
Isan-taona, Mamono Olona An-jatony i Iràna Amin'ny Ady Amin'ny Rongony Ataony Izay Vatsian'ny Firenena Mikambana Vola
MpanoratraHamid Yazdan Panah
Voadika ny 15 Oktobra 2016 14:22 GMT
Tady vavarana miandry ny famonoana ireo voafonja any Iràna. Sary avy tamin'i ICHRI ary nampiasaina nahazoana alàlana.
Efa an-dàlana ny fotoam-pivoriana faran'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana any New York City. Nahitàna mpandray fitenenana maro ilay fivoriambe, isan'izany ny Filoha Iraniana, Hassan Rouhani, izay nampiasa ny sehatra mba hiresahana ny momba ireo mahery fihetsika maneran-tany sy ny fifanarahana nokleary manan-tantara eo amin'i Etazonia sy ireo firenena hafa matanjaka eto an-tany.
Ny fanamelohana ho faty no zavatra tokana tsy nolazainy. Iray amin'ireo firenena eto an-tany manana taha ambony indrindra amin'ny fanamelohana ho faty i Iràna, zava-misy izay raha odian'ny ao anaty efitra tsy hita, dia notsipihan'ireo mpanao fihetsiketsehana tety ivelan'ny Fivoriambe kosa.
Maro amin'ireo famonoana no atao amin'ny anaran'ny adin'i Iràna amin'ny rongony, iray amin'ireo maha-latsa-drà be indrindra teto an-tany. Araka ny voalazan'ny mpitantna ao Iràna, mifandray amin'ny resaka rongony ny 93 isan-jaton'ireo nolazaina ho famonoana ho faty tao anelanelan'ny volana Jolay 2013 sy ny volana Jona 2014. Ny taona 2015, namono olona maherin'ny 966 isa i Iran, ny ankamaroan'ireo toa niatrika fanamelohana mikasika ny rongony.
Ary mpiray tsikombakomba ny Firenena Mikambana. Nandritra ny taona maro izay, nomen'ny Biraon'ny Firenena Mikambana Miady amin'ny Rongony sy ny Heloka Bevava (UNODC), famatsiambola ny Repoblika Silamo amin'ireo ezaka ataon'izy ireo amin'ny ady amin'ny rongony, fiaraha-miasa izay nampitombo ahiahy mikasika ny maha-fitondrantena mendrika sy ny maha-ara-dalàna ilay fandaharanasan'ny Firenena Mikambana, kanefa handeha ho azy tsy ho tsikeraina ao amin'ny Fivoriambe.
Naorina ny taona 1997 ny UNODC, mba hisahana ireo olana mahakasika ny varotra rongony sy ny fanararaotana, ankoatra ireo olana hafa mifandray amin'ny heloka bevava sy fanasaziana. Manana tetibola isaky ny roa taona vinavinaina ho 700 tapitrisa dolara Amerikana io, ary avy amin'ireo firenena Tandrefana ny ankamaroan'io famatsiambola io, izay ny ankamaroan'izy ireo no nanafoana ny fanamelohana ho faty amin'ny endriny rehetra.
Nanome an'i Iràna maherin'ny 15 tapitrisa dolara Amerikana ny UNODC hatramin'ny taona 1998 mba hanohanana ireo hetsiky ny Polisy Miady amin'ny Zava-mahadomelina ao amin'ny firenena. Izany rehetra izany na teo aza ny porofo mivainagana fa manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena, ary tsy manaraka ny fepetran'ny UNODC, ireo politikan'ny governemanta iadiana amin'ny rongony.
Nampifandray ny famatsiambola avy tamin”ny Firenena Mikambana tamin'ireo famonoana ho faty miisa 3.000 tany Iràna, isan'izany ny famonoana ho faty ireo ankizy maditra tsy ampy taona, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Reprieve any Royaume-Uni. Ny taona 2014 ohatra, nanantona tamin'ny tady zaza Afghana iray tsy ampy taona, 15 taona, Jannat Mir, i Iràna, noho ny nilazàna azy ho nikirakira rongony, na teo aza ny maha-tsy ampy taona azy.
Jereo ny tatitry ny Amnesty International, misy pejy 110, mikasika ny famonoana ho faty ireo zaza tsy ampy taona tany Iràna: “Mitombo ao amin'ny Làlan'ny Fahafatesana”
Matetika dia olona voahilikilika ao anatin'ny fiarahamonina Iraniana ireo vonoina ho faty. Tafiditra amin'izany ireo mpifindra monina tsy voarakitra sy ireo mpitsoa-ponenana avy any Afghanistan mpifanila vodirindrina, ary ny foko sy fivavahana vitsy an'isa izay miatrika tsy fahafahana migoka ny zony any Iràna.
Ny Febroary 2016, voalaza fa namono ireo lehilahy olondehibe rehetra tamin'ny mponin‘ny tanàna kely iray noho ireo fiampangana momba ny rongony i Iràna. Any Balochistan, faritra mahantra indrindra ao Iràna no misy an'i Roushanabad, ilay tanàna kely. Anisan'ny foko sy fivavahana vitsy an'isa ireo mponina ao, ary mivelona ny fiainan-tokatranony andavanandro amin'ny varotra an-tsokosoko ny ankamaroan'izy ireo.
Matetika no tsy omena fahafahana mandeha amin'ny dingan'ny fitsaràna ara-dalàna ireo miatrika fiampangana amin'ny raharahanà rongony. Notanisain'ny tatitra ny taona 2014 nataon'i Ahmad Shaheed, Mpitondra teny Manokan'ny Firenena Mikambana amin'ny resaka Zon'olombelona any Iràna, ny voalazan'ilay Iraniana mpisolovava izay niteny hoe “tsy maharitra maherin'ny minitra vitsy mihitsy ireo fitsaràna ny resaka rongony. Matetika tsy avela mahazo mpisolovava ireo voafonja, ary milaza fa azo tamin'ny fampijaliana ireo fiaikena heloka.
Niampanga an’ Iràna ho mampiasa ny fiampangana amin'ny rongony amin'ireo gadra politika sy ireo mpanohitra ny Human Rights Watch, izay nampitombo fiahiahiana vaovao mikasika ny fidiran'ny fanampian'ny UNODC an'ny fandaharanasa miady amin'ny rongony ataon'ny firenena. Ny taona 2009, nosamborina i Zahra Bahrami, izay vehivavy sady olom-pirenena Néerlandais no Iraniana ary nampangaina ho nivarotra rongony – fiampangàna izay nolaviny. Nilaza izy fa natao an-terisetra ny fibabohany, ary nanohana ireo mpikatroka mafana fo fa nifototra tamin'ireo fomba fijeriny ara-politika ny fisamborana azy. Novonoina ho faty izy ny taona 2011.
“Nanantona lazaina ho olona mania maherin'ny zato i Iràna tamin'ity taona ity, ary namaly ny Firenena Mikambana tamin'ny fideràny ny fahombiazan'ny politikan'i Iràna amin'ny ady amin'ny rongony no sady nanome azy famatsiam-bola ao anatin'ny dimy taona,” hoy Maya Foa, tale stratejikan'ny ekipan'ny Reprieve misahana ny fanamelohana ho faty, taminà tafatafa niaraka tamin'ny Guardian ny taona 2015.
Raha toa ka tokony hifantoka voalohany amin'ireo olana tsy lany, toy ny fahantrana sy ny tsy fahampian'ireo zavatra afaka ataon'ireo tanora izay tafalatsaka amin'ny fidorohana rongony, mbola manohy manao fanasaziana henjana be amin'ny isambatan'olona ihany i Iràna, tafiditra amin'izany ny famonoana am-pahibemaso azy ireny. Milaza ireo mpandinika fa tetikady ataon'ny fitondràna mba hitazonana ny fahefana ara-politika, amin'ny alalan'ny fampitahorana, ireny famonoana ireny, izay manohitra ny handray an-tànana ireo olan'ny fahantrana sy ny fidorohana rongony amin'ny alalan'ny fitsaboana sy fampandrosoana ara-toekarena.
Avy amin'ny fomba fijery araka ny lalàna, feno ny porofo fa fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ireo famonoan'i Iràna ireo, araka ny voasoratra ao amin'ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny Zo Sivily sy Politika (ICCPR). Ny ICCPR, izay mpikambana ao anatiny i Iràna, dia mitahiry mazava tsara ny fanamelohana ho faty ho an'ireo “heloka bevava goavana” irery ihany. Milaza mazava ny Andalana Faha-6 an'ny ICCPR fa tsy afaka ampiharina ny fanamelohana ho faty raha tsy nisy ny fitsaràna tsy mitongilana.
Ny taona 2012, namoaka taratasy maneho ny toerana raisiny ny UNODC, izay hita ho nitsikera ny fifandraisany amin'i Iràna. Nanamarika ilay taratasy fa “afaka jerena ho toy ny fanamarinana araka ny lalàna ireo hetsiky ny governemanta” ny fiarahamiasa miaraka amin'ireo firenena izay mampihatra ny fanamelohana ho faty. Nanao tsoakevitra io fa amin'ny toe-draharaha toy izany, “mety tsy hanan-tsafidy afa-tsy ny fampiasàna ny fanakatsoana vetivety na fanesorana ny fanohanana” ilay fikambanana. Hatreto anefa, tsy mbola naneho ampahibemaso ny finiavany hanaisotra ny fanampiany ny fandaharanasan'i Iràna ny UNODC.
Nampihatra ny famonoana ho faty noho ny rongony tamin'ny tsy fibabena heloka hatreto i Iràna, ary toy ny tsy hahazo fanontaniana sarotra avy amin'ny Firenena Mikambana. Ambany fitondran'ny Filoha Hassan Rouhani, izay hita sy atao matetika hoe mpanao politika “manana fandeferana”, ambony tokoa ny tahan'ny famonoana raha oharina tamin'ny fotoanan'ny fitondrana tsy refesi-mandidin'i Mahmoud Ahmadinejad — zava-misy marina izay mifanipaka amin'ny fototra mpanohana an'i Rouhani ary ireo fampanantenana “fitandremana sy fanantenana.” Ny taona 2015, nanamarika ny Mpitondra teny Manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona, Ahmad Shaheed, fa “vao mainka noharatsiana ny toe-draharaha amin'ny ankapobeny” amin'ny resaka fanajàna ny zon'olombelona eo ambany fahefan'i Rouhani.
Na mipetraka amin'ny sampan'ny fitsaràna aza, alohan'ny rehetra, ny fizakàna andraikitra tamin'ireo famonoana sy fanagadràna, nijanona nangina sy tsy nanao na inona na inona eo anatrehan'ny zava-mitranga ny fitantanan-draharahan'i Rouhani sy ilay notendrena ho minisitry ny fitsaràna, Mostafa Pourmohammadi.
Tsy very amin'ny rehetra ny fihatsarambelatsihy amin'ny fanampiana an'i Iràna. I Royaume-Uni, Denmark ary Ireland izao samy nanala ny famatsiambolany ho an'ny fandaharanasa ataon'ny UNODC ao Iràna, tamin'ny fitanisàna ireo olana amin'ny zon'olombelona. Kanefa, ireo firenena hafa, tafiditra amin'izany i Norvège sy Frantsa, mbola manohy manome famatsiambola ihany. Ny taona 2015, nanavao fifanekena mandritra ny dimy taona miaraka amin'i Iràna ny UNODC, sady nampanantena 20 tapitrisa dolara fanampiny. Araka ny nambara tao amin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, toa hita ho tsy tao anatin'ny fandaharam-potoana mihitsy ny resaka famatsiambolan'ny famonoana ataon'i Iràna.